Jawaar Mahaammad: Bakka amma geenye bara 2020tti ni geenya abdii jedhun qaba ture - BBC News Afaan Oromoo
OMN Addabaabayii Masqalaatti
Dhabbanni Sabaa himaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork, hiriira deeggarsaa Ministira muummee Dr. Abiy Ahimad, kalattiin tamsaasuun Oromiyaa keessaatti yeroo jalqabaaf hojii ifatti eegaluu Daayireekatarri Dhaabbaatichaa obbo Jawaar Mahaammad himan.
Ministirri muummee Dr. Abiyy Ahimad gara aangoo akkuma dhufaniin miidiyaaleen biyya alaa jiran gara biyyatti galanii waajira akka banatan waamicha dhiyeesan fudhachuun sochii biyyatti deebi'uu akka eegalan obbo jawaar himaniiru.
Himatni shororkeessumaa OMN fi daayireektara dhaabbaticha obbo Jaawaar Mahaammad irra ture akkasumas Labsiin yeroo muddamaa ka'uun OMN jila gara biyyatti akka ergu taasise.
''Seeronni kaan hanga ka'anitti eeguu hin qabnu, seennee haal duree tokko tokko qopheesinee hojii eegaluu qabna jennee murteesines'' jedha.
Torban saadi dura jilli gara Finfineetti ergame qaamota mootummaa fi hawaasaa wajjin mariyatee hojii eegaluuf haala duree xumuruu himan.
''Seerummaa fi meeshalee hojii jalqabuuf nu barbaachisan guuttanee gara hojiitti seenaa jirra'' kan jedhan obbo Jawaar, ''Hiriirri deeggarsaa MM injifannoo guddaa qabsoon uummata keenyaa fide waan ta'eef gareen OMN achitti ijaarame sanaan egaaluuf murteesse'' jedha.
Ibsa koreen qindeessituu hiriira deegarsa kenne irratti OMN argamee ture
Guyyaan akka kanaa akka dhufuuf shoorri OMN guddaa ta'uu fi hamilee uummataa fi hojjetoota isaaniitifis guyyaa kanatti hojii isaanii eegaluun gaarii ta'uus himaniiru.
Erga hundaa'ee waggaa afuriifi walakkaa keessatti si'a 29 mootummaa Itoophiyaatiin dhaabbatni isaanii ugguuramuu kan himan obbo jawaar, yaaliiwwan miidiyaa kana kuffisuu hedduun akka turan dubbataniiru.
''Nu ugguuruurraa kaasee hanga biyyoota adda aaddaa keessatti seerota addaa fayyadamanii dhiibbaa nurratti gochuu, hamma istuudiyoo keenya Kaayeroo jiru saamuu, gaazexessitoota keenya hiraarsuu, gara keesaanis rakkooleen nu qunnamaa turan'' jedha.
''Hojiidhaafi deeggarsa uummata keenyan irra aannee bakka kanarra geenye injifannoo guddaadha'' jechuun dubbata.
OMN xiiqiidhaan olaantummaa miidiyaa saba oromoorra jiru cabsuuf akkasumas uummatni mirga isaaf akka falmatu akka ijaarame kan himan obbo Jawaar, ''bakka amma geenye bara 2020tti ni geenya abdii jedhun qaba tures jedha.
OMN Bitootessa 1, 2014 erga hundaa'ee sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun mikaa'uus dubbatu.
Fuula durattis Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti waajiraalee saaqqachuun dhiimmoota Oromoo garaagaraa irratti akka hojjetan garuummoo Siyaasa irratti akka xiyyeefatamu dubbataniiru.
''OMN miidiyaa siyaasaati kanumaanii garacaalaatti fuulduarrtis kan deemu. Wanti Oromoo hunduu siyaasaan waan walqabatuuf achi keessaa bahuu hin dandeenyu.''
Deeggaratootni OMN maal jedhu?
''Bu'aa bayii nuti miidiyaa kan caqasuuf keessa dabarre, miidiyaan kunis sagalee uummataa ta'uuf bu'aa bayiin keesssa darbe sun hunduu darbee guyyaan kun gahuu isaatti gammachuu guddaan qaba'' jedha jiraataan magaala Adaamaa Caalaa Waaqshuumaa.
''Waan hundumtuu ta'uutti jiru kan nuyi yaannuun olitti ta'eeti kan natti mul'achaa jiru'' kan jedhu Caalaan ''kuni hundi tola hin dhufne, bu'aa qabsoo fi aarsaa qeerro, qarree fi beektotaati'' jedha.
Yeroo gabaabaa keessatti haalli kun ni uumama jedhee akka hin yaadnes dubbata.
'Humnoota TPLF'n wantoonni raawwataman seera biyyattiin yakka guddaan kan gaafachiisanidha'
'Duulli seera kabachiisuu kan dheerateef lammiilee nagaaf dursa kennuu keenyaafi'
Qataar maatii 'daa'ima buufata xiyyaaraatti gatamtee argamte adda baaste'
Kaabinoonni Joo Baayidan kaadhimatan eenyufaadha?